စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	နောက်ဆုံးရ သတင်း
Title Filter Display # 5101520253050100All	#	Article Title	1	မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၃) ကျင်းပ
2	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုဒိုသတင်းဌာနမှ ဥက္ကဌနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံအခြေစိုက် Kyungil (Engineering) Co.,Ltd မှ ဥက္ကဌတို့အားတွေ့ဆုံ
3	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့် ရွှေဘိုမြို့နယ် မင်းကုန်းကျေးရွာ အဆင့်မြင့်လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းအား ကြည့်ရှုအားပေး
4	နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုစင်တာ၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက-အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းရေးဆွဲကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုသားအဆင့်ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ
5	ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
6	ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်များအား တစ်နာရီအတွင်း ပြီးစီးအောင် လုပ်ကိုင်ပေးမည်
7	ထသက လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကိစ္စရပ်များအား တစ်နာရီအတွင်း ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမည်
8	CNG City Bus များ ရောင်းချခွင့်ပြုမည့်အစီအစဉ်
10	ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကုန်စည်ပြပွဲ ၂၀၁၃ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
<< Start < Prev 1234567 8910 Next > End >>	JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	အခြားပြည်တွင်းသတင်းဟောင်းများ	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3951527 Since June 2008